SERIE A: Inter Milan oo guuldarro kala kulantay Cagliari oo marti u ahayd iyo kulamadii kale ee la ciyaaray… + SAWIRRO – Gool FM
SERIE A: Inter Milan oo guuldarro kala kulantay Cagliari oo marti u ahayd iyo kulamadii kale ee la ciyaaray… + SAWIRRO
Haaruun October 16, 2016
(Milano) 16 Okt 2016 – Kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa guuldarro 2-1 kala kulantay naadiga Cagliari oo marti u ahaa kulan ka tirsan horyaalka Serie A ee Waddanka Talyaaniga.
Inter Milan ayaa iska lumisay fursad ay hoggaanka ciyaarta ku qaban kartay qeybtii hore ee kulankan, kaddib markii uu gool ku laad ka khasaariyey 25’daqiiqo Mauro Icardi, markii rigoore loo dhigay Icardi oo maaliyadda uu ka jiiday Bruno Alves, isagoo ku jira xerada ganaaxa, sidaas ayaana lagu kala nastay goolal la’aan 0-0.
Qeybtii labaad ee kulankan markii dib la isugu soo laabtay 56’daqiiqo Joao Mario ayaa hoggaanka u dhiibay kooxdiisa Inter Milan, inkastoo labo gool laga daba keenay.
Federico Melchiorri ayaa kooxda Cagliari goolkaas u barbareeyey 71’daqiiqo, ka hor inta uusan laad uu soo tuuray 85’daqiiqo Federico Melchiorri uusan iska dhalin goolhaye Samir Handanovic oo shabaqa u celsha Internazionale, kulanka ayaana ku soo dhammaaday 2-1 looga adkaaday Inter Milan.
Kooxda Cagliari ayaa degtay kaalinta 7-aad ee kala horreynta horyaalka Serie A, iyadoo leh 13-dhibcood, halka Inter Milan ay iska sii fadhiso kaalinta 11-aad iyadoo haysata 11-dhibcood.
Kulamadii kale ee la ciyaaray horyaalka Serie A:-
RASMI: Kooxda Man United oo heshiis cusub ka saxiixatay goolhayaheeda Sam Johnstone
Cesc Fabregas oo filnaya canugiisii 3-aad, laakiin markan waa WIIL oo Gabar ma ahan